Tsy mandeha ny fanairana iPhone? Ity ny antony & The Fix! - Payette Forward - Iphone
iphone 6s microphone tsy mandeha
tsy mahazo fampandrenesana fanosehana amin'ny iphone
alefa ny autocorrect iphone 6
ahoana no hamonoanao ny autocorrect amin'ny iphone
sary milaza fa tsy misy sary amin'ny iphone
Tsy mandeha ny famantaranandron'ny iPhone anao ary tsy azonao antoka ny antony. Nandiso fivoriana sy fanendrena manan-danja ianao noho io! Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny antony tsy mandeha ny fanairana iPhone anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara .
Atsangano ny Volume Ringer
Ny volavolan-tariby ao amin'ny iPhone anao no mifehy ny feon'ny alaranao. Arakaraky ny maha avo ny haavon'ny ringer no mihabe ny fanairana!
Raha te hampitombo ny volan'ny finday an'ny iPhone ianao dia sokafy ny Settings ary kitiho Feo & Haptics . Ilay slider ao ambany Ringer Ary Fanairana mifehy ny volan'ny ringer ao amin'ny iPhone anao. Arakaraky ny halaviranao ny mpikorisa amin'ny ankavanana, ny halehiben'ny feon'ny feony!
Mametraha tabataba fanairana
Rehefa mamorona fanairana amin'ny iPhone-nao ianao dia manana safidy hametraka feo manokana. Mety ho tsara daholo izay feo rehetra!
Na izany aza, raha misafidy ianao tsy misy toy ny feo mandeha rehefa mandeha ny fanairana, dia tsy hanao tabataba ny iPhone-nao. Raha tsy mandeha ny fanairana iPhone anao dia azo inoana fa napetraka ho tsy misy ny fanairana anao.
Misokatra Famantaranandro ary tap ny Fanairana kiheba eo ambanin'ny efijery. Avy eo, tap Ovay eo amin'ny zoro ankavia ambony ary kitiho ny fanairana izay tsy mandeha.
fampidinana fivarotana app ho an'ny ipad
Alaivo antoka tsy misy tsy voafidy ho Feo. Raha Tsy Misy Voafidy, kitiho MISAINA ary mifidiana zavatra hafa. Hisy marika fanamarinana kely eo akaikin'ny feo izay nofidinao. Rehefa faly amin'ny tonony nofidinao ianao dia kitiho afa-tsy eo amin'ny zorony ankavanana ambony amin'ny efijery.
Ahoana ny famoahana alika amin'ny iPhone
Azonao atao ny mametaka fanairana amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanokafana ny Clock sy ny fikitihana Ovay . Tsindrio ny fanairana izay tianao amboarina, avy eo alefa ny switch eo akaikiny Matory .
Rehefa mandeha ny Snooze, dia hahita safidy iray hamelana ny fanairana ianao raha vantany vao maty. Azonao atao ny manindry ny bokotra Snooze eo amin'ny efijery iPhone Home anao, na tsindrio ny bokotra midina hampihenana ny fanairana anao.
Ny fanavaozana ny iPhone dia fomba tsara hanamboarana bibikely rindrambaiko madinidinika. Apple dia namoaka fanavaozana mba hamahana ny olana kely ary hampahafantatra ireo fampiasa iPhone vaovao.
Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Fanavaozana ny lozisialy . paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana rindrambaiko misy. Raha tsy misy ny fanavaozana ny iOS dia miroso amin'ny dingana manaraka!
Mety misy olana amin'ny rindrambaiko lalina ny fisorohana ny iPhone tsy hanao tabataba rehefa misy fanairana. Mety ho sarotra ny manara-maso ny olan'ny lozisialy sasany, noho izany dia hamboarinay indray ny zava-drehetra .
Rehefa averinao indray ny fikirana rehetra, dia averina amin'ny laoniny ny factory rehetra. Tokony hampifangaroinao amin'ny iPhoneo indray ny fitaovana Bluetooth anao ary ampidiro indray ny teny miafinao Wi-Fi.
Mba hamerenana ny fikirana rehetra ao amin'ny iPhone anao dia sokafy Fikirana ary tap General -> Reset -> Avereno ny fikirana rehetra . paompy Avereno ny fikirana rehetra hanamafisana ny famerenana. Ho faty ny iPhone, hamerina ary hiverina indray rehefa vita ny famerenana.
Ny dingana farany azonao raisina alohan'ny hamoahana olana momba ny lozisialy amin'ny iPhoneo dia ny famerenana amin'ny laoniny ny DFU. Ny famerenana amin'ny laoniny DFU no karazana famerenana amin'ny laoniny iPhone. Ny tsipika kaody rehetra dia voafafa ary avoaka tahaka ny vaovao, mamerina amin'ny laoniny ny iPhone amin'ny fivarotan'ny orinasa.
Izaho dia mandrisika mitahiry backup amin'ny iPhone-nao ka tsy ho very ny angon-drakitrao na ny mombamomba anao voatahiry. Zahao ny torolàlana tsikelikely anay rehefa vonona ianao apetraho amin'ny maody DFU ny iPhone-nao !
Raha mbola tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny fampandrenesanao dia mety hiaina olana amin'ny hardware izy io. Mety hisy ny olana amin'ny mpandahateny raha tsy mitabataba mihitsy ny iPhone.
Izaho dia mandrisika fandaharam-potoana ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana mba hahafahan'ny Genius mijery ny iPhone-nao. Raha azonao antoka tsara fa tapaka ny mpandahateny iPhone anao, mamporisika ihany koa izahay hanin-kotrana , orinasa mpanamboatra on-demand.
manonofy ny hala maty vady
Torohevitra momba ny fiantsonana famantaranandro famantaranandro iPhone
Ny toeram-piantsonana famantaranandro fanairana iPhone dia afaka manampy anao hanomboka tsara amin'ny andronao isan'andro. Ny dock famantaranandro dia afaka mihantona mivantana amin'ny iPhone, mba hahafahanao mameno ny iPhone mandritra ny alina ary mifoha amin'ny mozika tianao isa-maraina. Amporisihinay ny iHome iPL23 Famantaranandro , izay misy mpampitohy amin'ny Lightning ho an'ny iPhone, seranan-tsambo USB ho an'ny fitaovana hafa, radio FM, ary fisehoana famantaranandro nomerika.
Ny famantaranandro fanairana amin'ny iPhoneo dia mandeha indray ary tsy hatory tsy ho ela ianao. Ho fantatrao tsara izay hatao amin'ny manaraka raha tsy mandeha ny fanairana iPhone anao! Raha manana fanontaniana hafa ianao, aza misalasala mamela azy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.